Nke a bụ ihe You Kwesịrị Knowmara Banyere Mgbasa Ozi Audio nke YouTube - SoNuker webatara
Nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mgbasa ozi ọdịyo nke YouTube webatara
Newzọ ọhụrụ iji kpọsaa na YouTube
E nwere nnọọ ole na ole ihe mere YouTube aghọwo ndị na-aga-na video gụgharia n'elu ikpo okwu n'ihi na ihe karịrị 2 nde mmadụ n'ụwa nile. Ikpo okwu nwere nde mmadụ 30 na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, na-ekiri ihe karịrị otu ijeri vidiyo kwa ụbọchị. Ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ nke abụọ a na-agakarị mgbe Google na nne na nna ya gasịrị, na-ewepụta ijeri $ 3.81 dị ka ego mgbasa ozi na nkeji nke abụọ nke 2020. YouTube na-enweta pasent 27.1 nke mmefu na mgbasa ozi vidiyo dijitalụ. Pasent 62 nke ndị na-ere ahịa bu n'obi itinyekwu ego na mgbasa ozi YouTube.
Kemgbe ọrịa COVID-19 gbaruru ụwa, ndị mmadụ abanyela na YouTube dị ka isi iyi ntụrụndụ ma nọrọ n'ụlọ. Nke a emeela ka ọtụtụ ndị na-ere ahịa lekwasị anya n'ahịa vidiyo na usoro mgbasa ozi YouTube iji belata asọmpi ahụ ma nwee ọganihu n'oge oge siri ike. Na-eburu n'uche mkpa ọ dị ịbawanye ahịa na ịbanye, YouTube ewebatala mgbasa ozi egwu egwu. Nke a bụ usoro ederede mgbasa ozi na-abụghị vidiyo nke a na-emepụta iji mepụta njikọ dị n'etiti ụdị na ndị ahịa site na egwu egwu egwu YouTube.
Ndị na-ere ahịa ika nwere ike ịmaworị maka mgbasa ozi ọdịyo nke na-apụta mgbe ha na-agba ọsọ mgbasa ozi Podcast. Ma usoro mgbasa ozi ọhụụ nke YouTube bụ mpaghara na-enweghị ikike maka nnukwu vidiyo-gụgharia yana ụfọdụ ndị mgbasa ozi. YouTube na-ekwusi ike na mgbasa ozi ndị a na-eme ka ọ dị mma maka ọtụtụ ọwa egwu.
Mụbara ika mmata na iru
Audio ọdịyo na YouTube nanị nwere a voiceover na-anapụta ozi. Ndị na-ekiri ga-ahụ naanị ihe nkiri dị mfe ma ọ bụ ihe oyiyi dị na ihuenyo mgbe mgbasa ozi ọdịyo na-agba. Mgbe nyochachara alfa nke mgbasa ozi ndị a, YouTube kwubiri na mgbasa ozi ọdịyo nyere aka nke ukwuu n'ịmepụta mmata ngwa ahịa. Ka ọ dị ugbu a, mgbasa ozi ndị a dị na ọkwa beta. YouTube na-ere ahịa mgbasa ozi ndị a na CPM dabere na Ngosipụta & vidiyo 360 na Mgbasa ozi Google.
Mgbasa ozi mgbasa ozi na YouTube, mgbe ị ghọrọ ihe mgbasa ozi kachasị mkpa, ga-enye ọtụtụ ndị mgbasa ozi nhọrọ. Iji nwekwuo mmata na njirimara, ndị na-ere ahịa ahịa nwere ike iji nhọrọ ezubere iche dị elu, ikike ebuli ngwa ngwa, yana usoro ịgba ọsọ mgbe ị na-agba mgbasa ozi mgbasa ozi na YouTube. Agbanyeghị, YouTube na - emesi ike ike mgbasa ozi ọdịyo iji ruo gazillion ndị hụrụ egwu na - eji ikpo okwu.
Okwesiri ka ndị egwu egwu mma
O doro anya na egwu bụ ihe dị mkpa gbasara ndụ na omenaala ndị mmadụ. Ndị mmadụ hụrụ na-ege ntị music, na YouTube bụ nke mbụ nhọrọ na-abịa n'uche mgbe ọ bụla ha chọrọ iji lelee a music video. Egwu gụgharia na YouTube eruola oke dị egwu, ebe ndị hụrụ egwu na-eri ọtụtụ oge nke egwu egwu n'elu ikpo okwu. N'iburu echiche a nke ndị mmadụ, YouTube na-achọ ugbu a inye ndị na-ere ahịa ohere ọla edo ijide ndị na-ege ntị na-enwetaghị.
E wezụga mgbasa ozi ọdịyo a na-ekwu banyere ya, YouTube na-ewebata ihe a na-akpọ usoro egwu dị egwu, nke bụ ihe ngwọta ọhụrụ maka ụdị iji bulie ọnọdụ ha n'otu oge na ọdịnaya egwu. Mbupute kachasị ọhụrụ bụ ụyọkọ nke ọwa YouTube metụtara egwu na-ezipụ ụdị dị iche iche dịka okwute, K-pop, Latin, hip-hop, mgbatị ahụ na ahụ ike, egwu obodo, na ọtụtụ ndị ọzọ. Usoro egwu dị omimi na-enye ndị na-ere ahịa ohere dị mma iji ruo ọtụtụ ndị na-egwu egwu egwu n'ụwa niile ma bulie mmata ama.
Yabụ site na mgbasa ozi ọdịyo nke YouTube na ahịrị egwu, ụdị nwere ike ịdị na-enwe mmetụta ka ukwuu, ọkachasị site na ikpo okwu na-enwetakwu ewu ewu n'oge ọrịa ahụ. Advertisingdị mgbasa ozi ndị a nwere ikike ịbawanye ogo nke ụdị nwere ike iru ndị na-ege ha ntị ma chụpụ nsonaazụ azụmaahịa. Ọ bụ ihe na-erughị oge ka YouTube na-apịgharịa nhọrọ ndị a maka ndị mgbasa ozi ijide.
Kedu ihe bụ Buzz About the YouTube kacha ọhụrụ site na Kidfluencers?
Kidfluencers na-eme ihe dị iche na ụwa nke YouTube mgbasa ozi Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ naanị ndị okenye na-eme ihe nkiri, ndị na-eme egwuregwu, na ndị a ma ama nwere ike ịghọ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, mgbe ahụ ikekwe ọ bụ oge inye ya nke abụọ…
Imi na-ebuli okirikiri YouTube Channel: Ihe kpatara o ji dị mkpa maka ịzụ ahịa
Cheedị echiche nke a; akpọwo ụfọdụ ndị enyi ọhụrụ n'ụlọ gị, n'ime uche gị, ị ga-achọ iso ha nwee mmekọrịta na-adịgide adịgide ma chọọ ka ha nọgide na-abịa. N'ọnọdụ dị otú ahụ,…